Guddoomiyaha KULMIYE oo shicabka ku hambalyeeyey munaasibadda Ciidul-fidrida iyo xuska 26-ka June | KULMIYE
Hargeysa 25/6/2017(Warbaahinta Xisbiga KULMIYE)- Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa Madaxweynaha xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa guud ahaan shucuubta Islaamka, gaar ahaanna shacabka Somaliland ku hambalyeeyey munaasibadda ciidul-fidriga ee sanadka 1438-ka.
Md. Muuse Biixi waxa uu hadal dardaaran ah oo sidii wax loo wada qabsan lahaa ah u diray shacabka reer Somaliland, waxaannu yidhi, “Munaasibadda 26-ka June waxaan ummadda reer Somaliland ku dardaarayaa; kow in aynaan guul ku gaadhayn haddii aynu ka baqanno duruufaha adag ee ina haysta oo xoogga dalku tahriibo, dhallinyarada dhibaato shaqo la’aaneed baa haysata waa run, qofku markuu shaqo la’yahayna wuu jahawareeraa oo waxa u muuqda tigaada dalalka kale ka muuqda inuu doonto, laakiin bal aynu is waydiinno tobankii sanno ee u dambeeyey ilaa tobankii sanno ee u dambeeyey maxay guul gaadheen? Xooggoodii iyo waxtarkoodii wuu innaga maqanyahay, boqolkiiba waxyar oo 1 ama 2% ayaa la odhan karaa waxbay baratay ama hanti bay ka heshay qurbaha, inta kale halkii ay tageen ayey ku xidh-xidhanyihiin oo ay nolosha la dagaalamayaan, faqri bay ka carareen, halkaana waxba kuma hayaan. Waad aragteen iminka inta shaqo doon ah ee dalka ku soo noqota ee shaqo ka doonaysa dawladda iyo dalkani waa intii dhooftay, hadday meeshaa (qurbaha) waxyaalaan kuwa dhoofaa fursadaha halkan yaala waxay u dayn lahaayeen kuwa dalka jooga.